धरान / बालबालिकाहरुमा वढ्दो मोटोपानका कारण मधुमेह रोग देखीन थालेपछि धरान स्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरुले सचेतना कार्यक्रम सुरु गरेका छन् । विश्व मधुमेह दिवसको अवसर पारेर प्रतिष्ठानको मेडिसिन विभागमा कार्यरत चिकित्सकहरुले विभिन्न स्कुलमा पुगेर रन फर अ हेल्दी लाइफ नामक सचेनता कार्यक्रम सुरु गरेका हुन् ।
बाल–बालिकामा मोवाईल र कम्प्युटरमा धेरै व्यस्त हुने गरेको कारण शारिरिक व्यायाम नहुने हुदा उनिहरुमा मोटोपना वढे सगै मधुमेह देखा पर्ने गरेको कारण आफहरुले रन फर अ हेल्दि लाइफ कार्यक्रम सुरु गरेको प्रतिष्ठानको मेडिसिन विभागमा कार्यरत मधुमेय रोग विषेशज्ञ प्राध्यापक डाक्टर रविन मास्केले जानकारी गराएका छन् ।
पहिलो चरणमा प्रतिष्ठान हाता भित्र रहेको दिल्ली पब्लिक स्कुलमा कक्षा १ देखी १० सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई रनमा सहमागी गराइएको डाक्टर मास्केले वताए । उनिहरुलाई रनिङ सगै मधुमेह रोग लाग्ने तरिका र बच्ने उपाय का बारेमा समेत जानकारी गराइएको उनले जानकारी गराएका छन् । डा मास्केले ३५ जना बाल बालिकामा मधुमेय चेक गरिएको र ३ जनामा मध’मेहको मात्र वोर्डर लाईन देखिएको जानकारी दिए ।
रनिङमा सहभागी बालबालिकाहरुलाई प्रमाण पत्र तथा मेडल समेत प्रदान गरिएको थियो . मेडिसिन विभागले यस अघि पनि विश्व मधुमेह दिवसको अवसर पारेर ओपिडीमा आएका विरामीको लागी निशुल्क चेक जाँच गरेको थियो . यो पटक नोभेम्बर १४ मा परिवार र मधुमेह नाराका साथमा मनाइएको थियो .